Xog: Wasiiro ka socday DF oo xalay la kulmay Qalbi Dhagax (Yaa ka mid ah?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 7 July 2018 7 July 2018
Nairobi ( mareeg news ) Mas’uuliyiin ka tirsan dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kula kulmay Cabdikariin Muuse Qalbi-Dhagax, oo horey ay dowladda ugu gacan gelisay Kenya, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Xog ayaa sheegeysa in xubnaha ka socday dowladda uu hogaaminayey wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad, oo kasoo jeeda beesha Qalbi-Dhagax ee Ogaadeen. Waxaa ku wehliyey xildhibaano iyo wasiiro ku xigeeno.
Sawirro:-Shir Muhiim Ah Oo Lagu Soo Gabagabeeyay Muqdisho